Ogaden News Agency (ONA) – Waxay Ahayd Markii iigu Horeysay een Taageeray Cabdi iley – Noora Afgaab
Waxay Ahayd Markii iigu Horeysay een Taageeray Cabdi iley – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ September 1, 2015
Isagu siduu doonaba ha ugasoo cararee, shirkii EPRDF-ta ee ka dhacay magaala madaxda Tigree waxaa u muuqatay wufuudii fadhiday ee dibadda iyo gudahaba isaga timid inay Somalidu ka mid ahayn, kana mid ahaan jirin, qabtolka uu Minilik isku qasbay. Cabdi iley inuu korsigaa soo baneeyo waxay ahayd guul aan la filaynin oo shacabka Ogadenya ee dulman usoo hoyatay. Waxaana lagu tilmaami karaa inay ahayd hadiyad Eebe.
Waxaa dhaqan u ah shirweynaha EPRDF in shahaado sharaf lagu gudoonsiiyo xisbiyada gacan ku samayska ah ee EPRDF-ta uga wakiilka ah qawmiyadaha aan ku jirin isbahaysiga EPRDF, taasoo ay ku mutaystaan taageerada ay siiyaan xisbiga talada haya ama u laayaan shacabkooda. Hadaba markii la soo gaadhay oo lagu dhawaaqay xisbiga Cabdi iley oo loo yeedhay ESPDP, laguna soo celceliyay iyadoo la’is leeyahay mindhaa af-amxaariga ayaanay fahmin (inkastoo cabdi iley uu jecelyahay in laga daawado TV-yada isagoo ku hadlaya af-amxaariga), ayaa waxaa la waayay qof soo istaaga oo gudooma shahaadadii lasiin lahaa Cabdi iley.
Waxaa si fiican uga faalooday qoraaga ku saxiixa magaca Gabalaax oo arimahaa sida fiican wax uga qora, waxaana ka mid ahaa qoraalkiisa;
.. Hadaba iyada oo dalka oo dhan si toosa looga daawanayo, madaxdii dalka oo dhana goobta ku sugantahay, ayaa waxaa la yeedhiyey Xisbiga Dimoqraadiga shacabka Soomaalida, waxaa lagu dhawaaqay hadana, waxaan soo dhawaynaynaa ESPDP, sacabkii ayaa la tumay lagusoo dhawaynayey, nasiib daro hoolkii ayaa wax ka dhex kaca la waayey, hoolkii baa la iswada eegay, waxaa loo maleeyey inaan la maqlayn, waxaa mar labaad iyo sedexaad lagu dhawaaqay magaca xisbiga ESPDP, walaa xaaga. Wax goobtii ka kaca oo shahaadadii qaada la waayey.
Waxaa gaba gabadii la waayey hal qof oo shacabkii soomaalida matalaya, oo goobtii arimaha wadanka Itobiya lagaga arinsanayey jooga, waxaa la waayey hal qof oo magaca soomaalida ku qaada shahaadadii mahad naqa ahayd, waxaa meeshii laga ogaaday, inkastoo aan la shaacinin in Somalida aanay ka mid ahayn Itobiyada Maqale isugu timid, waxaa si cadaan ah looga sheegay goobtii in aanay jirin cid deegaanka soomaalida ka socota oo shirka joogta, halkii ayaa sawaxan iyo is waydiin ka bilaabmatay, waxaana lagu dhamaystiray, siduu qoray Gabalaax, in deegaanka Soomaalida xukumada ka jirtaa Qayra masuul tahay qaadina karin xilka iyo waajibaadka umada.
Waxaa aad loo hadal hayaa maanta magaalada Jigjiga fadeexadaha isdaba jooga ah ee Cabdi iley uu dhex fadhiyo, taasoo ninba uu si u taxliilinayo, waxaase la’isku raacsan yahay, siduu u dhacay shirweynaha xisbigaa EPRDF marka la fiiriyo iyo kusoo noqoshada R/wasaarinimada H. Desalegn oo la’is lahaa waxaa ka dhici doona tartan xoogan, in Itobiya ay u bilabanayso marxalad cusub oo ka duwan midii hore, taasoon dib kaga faaloon doono.